အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့စီးပွားရေးလျှို့ဝှက်ချက်ရှိပါတယ်, မီးရှို့ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်ပြုတ်ရည်ကိုသောက်သုံးဆက်လက်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်နေချိန်မှာ .. ပျက်စီးပြီးတော့ Pampa ပြန်ကြီးထွားလာနေသည်
ကျူးဘား: သံလက်သီးနှင့်အတူ Hook စစ်ဆင်ရေးစစ်ရေးမဟာဗျူဟာ၏ဥပမာတစ်ခု
ကျော်လွှားနှင့်မဟုတ်ရင်ခြိမ်းခြောက်သောသူတို့အားကြပြီမဟုတ်ကြောင်းကာရစ်ဘီယံ, အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်ကာလတွင်လည်းငလျင်များထဲတွင်။
ဟေတီ - ငါအလိုမရှိများအတွက်လုပ်နိုင်, မငါမေ့လျော့သင့်တယ်မဟုတ်။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ဟေတီအတွက်တာဝန်ရှိသည်က၎င်း၏မူဝါဒစိတ်တိုးပွားနှငျ့ပတျသကျသောနိုင်ငံခြား element တွေကိုစွန့်ခွာနေကြ
မိုးရွာရွာနှိမ့်ချသောဘဝတွေကိုကျော်လွန်, အရာအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားသောမျက်လုံးများ .. (အီကဗျာတစ်ပုဒ်) ကျော်လွန်
သူလွဲချော်သည့်အခါမျှပိုဆိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း crudity ချွေတာခြင်းနှင့်သစ္စာရှိမှုပြသသောဝန်ထမ်းတွင်
ဟေတီ Burn! ကာရစ်ဘီယံ Antillean အတွက်အသစ်တခုလူမှုရေးကသောင်းကနင်း၏အစ
ကံကောင်းထောက်မစွာလူတိုင်းအတွက်, သင်ထင်သောအရာကိုမစ္စတာ Juan Antonio Morales ပြောနိုင်
Naiara Galarraga, Pedro Sanchez နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝမ်းနည်းမှုသို့ထိုး ..
ကင်တားနား Alberto Izaguirre, စာအုပ်တွေတစ်ခုရေးသားသူအတွက်အချက်အလက်များ, အတွေ့အကြုံနှင့်တစ်ခုမရှိမဖြစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမှအထက်သို့သုံးနိုင်
Cogito ergo sum အား, ဒါမှမဟုတ်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဘဝကိုရှာတွေ့၏အတွေးအခေါ်များကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ရာမှ
107 အချက်များအတွက်စစ်တိုက်ပွဲများနှင့်ချစ်ခြင်းအတွက် Murphy ရဲ့ဥပဒေ
Miyamoto Musashi: "ငါးလက်စွပ်၏စာအုပ်" နှင့်ချိန်ခွင်လျှာ 10 ၏ဥပဒသေမြား
စပိန်ဆော်ဒီအာရေဗျမှ 400 ဗုံးရောင်းချ
အခြားနိုင်ငံများကမ္ဘာမြေလို့ခေါ်တဲ့ချွေးပေါင်းအိမ်တစ်ဆေးပြင်းလိပ်ဆေးလိပ်ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာဥရောပနိုင်ငံရေး coddle သောမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ collusion ထဲမှာ Power ကုမ္ပဏီများသည်, ချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်အနိုင်ရရှိပါသည်
စပိန်ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြိုင်ဘက်% 50 မှတက်၏အထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူနေရာယူထားကြသည်
နက်နဲသောအရာဖော်ပြခဲ့တယ်။ Vampire ငါတို့တှငျရှိပါသညျနှင့်
Palma de Mallorca: ဒေသခံအခွင့်အာဏာအားလုံးကဏ္ဍများတွင်စီးပွားဖြစ်ထိခိုက်နစ်နာအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်
စပိန်တရားရုံးချုပ်: အဘဏ်လုပ်ငန်းလော်ဘီသည်အမြဲတမ်းနိုင်ငံရေး "လောင်းကစားရုံ" တွင်အနိုင်ရ
သူတို့အနာဂတ်စျေးကွက်ကိုယ်စားပြုအဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြောနေတာသည့်အခါ Dale Carnegie ရဲ့ဆက်ခံတစ်ခုမှာအလွန်မကြာမီအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကို
ဂျော့ခ်ျဆိုးရော့နှင့် Pedro Sanchez, ဥရောပကျူးကျော်နောက်ထပ်ဗားရှင်း
ကာတာလအကျပ်အတည်းတရားမျှတရေးဂျာမနီမှာရှုံးနိမ့်သွားလာနှင့်ဥရောပယူနီယံအကျိုးစီးပွားပျောက်ကွယ်သွားစုဆောင်း, စပိန်အတွက် ပို. ရငျ့
မှောင်မိုက်အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်ကျူးကျော်ဆံ့နိုင်ခြင်းအားနည်းဥရောပ၏စည်းစိမ်ချမ်းသာ, drop လိမ့်မည်ဟုဆိုးယုတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကဝင်ရိုးများနိုင်သလဲ
18 50.000 ဆရာဝန်များ 2017 အတွက်ယူရိုထက်ပိုပြီးအသီးအသီးဆေးဝါးလက်ခံရရှိ
ဆေးဝါးလုပ်ငန်းရောဂါကျင့်ဝတ်၎င်း၏ Code ကိုအတွက်အာရုံစိုက်နေသည်
တစ်ခု universal အရင်းအမြစ်အကူအညီများအဖြစ်စပိန်ကွာကုစားခြင်း
စပိန်၏နယူးအစိုးရ: ရှေ့နေတွေ, ဆရာဝန်တွေ, စီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့်တစ်ဦးအာကာသယာဉ်မှူး ..
တစ်ဦးကဒီမိုကရေစီသတင်းအချက်အလက်င့်လင်းမြင်သာဖို့ access ကိုကန့်သတ်လို့မရပါဘူး, စပိန်စေသည်
ကော့စတာရီ: အဆိုပါ "အိမ်အောက်ခန်း" မူးယစ်ဆေး Cali နှင့် Medellin cartels
Nicolas Maduro Moro: ဗင်နီဇွဲလားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တစ်မူထူးခြားသောတာဝန်ရှိပါတယ်
Haitien ကာရစ်ဘီယံ - ဒိုမီနီကန်ချွတ်သူ, ပူရသနည်း
အဆိုပါ Bilderberg ကလပ်လေးနက်ပဋိပက္ခများသည်သူ၏ကျယ်ပြန့် Decalogue share ကြဘူးသူကို propinando ဆဲအလွန်တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုလူသားထု brainless features တွေနှင့်အတူဖွဲ့စည်းသောမှောင်မိုက်နှင့်သံသယသို့ကျုံ့
ရေနံ, စီရင်ချက်ကိုပယ်နှငျ့ Michele သမ္မတအိုဘားမား Mallorca မှအလည်အပတ်ခရီးစွပ်စွဲ
ယင်း၏ပထဝီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်စပိန်နှင့်2º CNI (Center ကသဘာဝနှောက်ယှက်ခြင်း)
မောမော / Parsimony ဒိုမီနီကန်အစိုးရ vs ဟေတီသည် "အဆုံးစွန်ကျူးကျော်" enable နိုင်ပါတယ်
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောနှင့်အာဏာရှင်တွေသေဆုံးပြန်လာအတွက်ဟေတီ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များ၏အအေးစိတ်ထဲတွင်တစ်တိုင်းပြည်နွေး။ ယနေ့တွင် 63 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်မှာ "ကလေး Doc" ။
အခြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြုံးများနှင့်ရယ်မောခြင်းနှိုးဆော်ခြင်းကြောင်းညှိထဲက justicieros interrogatories
မစတင်မီကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ငြိမ်းချမ်းရေးသို့မဟုတ် output ကိုရှာသောသူတစ်ဦးပထမကမ္ဘာစစ် III ကို၏ပြဿနာနိဒါန်း
Khashoggi, ပထဝီနိုင်ငံရေးနှင့် geopoder စင်ကြယ်သောစိုးရိမ်ပူပန်
အမှန်တရားအတိုင်းစကားလုံးကိုသုံးသူကိုဥရုဂွေးအတွက်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားသည့်အခါအဆိုပါစိတ်ပျက်စရာ သာ. ကြီးမြတ်သည်
အဆိုပါ OAS တစ်ခုနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားအာဏာရှင်စနစ်အားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့လူဦးရေထိခိုက်ကြောင်း, သွေးထွက်သံယိုစစ်တပ် feat အတူဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကနှင်ထုတ်ရန်လာချင်ပါဘူး
အဆိုပါ OAS မရှိတော့ဘယ်မှာသွားကြဖို့ကိုသိသူတစ်ဦးကလူအမျိုး၏မာနကယ်တင်, ဗင်နီဇွဲလားအတွက်ကြားဝင်စဉ်းစား
2017 အတွက်ကွယ်လွန်သည် "လေးများသည်သေနတ်ကိုင်တပ်သား" နှစ်ယောက်မှာ "အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့" သစ်ကိုကုန်သွယ်မှုစာချုပ်များ၏ဗိသုကာ။
နက်နဲသောအရာ II ကိုအဝတ်မခြုံဘဲ - "Vampire လူသားအာရုံပျက်"
နီကာရာဂွာသူတိုင်းပြည်သူတို့ယုံကြည် Daniel Ortega မှလက်နက်ချမည်မဟုတ်
Nicolas Maduro ဟိုဆေး Marty ၏စကားကိုသတိရပါ။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ဟေတီနာကျင်မှုအတွက်သစ်တစ်ခုကပ်ဆိုးကြီးအတွက် puddle ဖို့မမျှော်လင့်တဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်တက်အဆုံးသတ်။
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ: အနိမ့်လုပ်ခ, slavers နှင့် Air ယူရိုပါလိဂ်မစ္စတာ Hidalgo
မြည်တမ်းခြင်းမရှိဘဲသည်းခံယခုဘဝ၌သင်ယူရမည်ကိုသာသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ Vincent Van Gogh (1853-1890)
Trump မဟာမိတ်များရှာကြံ: မာရ်နတ်တစ်ဦးကောင်းဘွိုင်နှင့် "Prada" ၏တစ်ဦးအပျိုစင်အဖြစ််၏
တစ်ဦး inexorable အစုလိုက်အပြုံလိုက်ခွန်အားမရှိခြင်းသို့လှည့်တစ်ဦးအဖြစ်ဆိုး၏ပင်နယ်တီ corrodes စဉ်ဗင်နီဇွဲလားအာဏာရှင်, ထုပ်ပိုးဖို့ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါပူနွေးမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်အေးခဲနေသော sleazy ယူ, ယူ! .. မဟုတျဘဲမှတ်ချက်
ဒို Inda Arriaga: အရီးယန်းကျွန်းဆွယ်၏ပိုကောင်းအသိပေးလူများတဦးတည်းဖြစ်ခြင်း၏ထိုက်တန်တဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုပေး
Henry Kissinger: တစ်ခု "ဉာဏ်အလင်း" .. သူတို့ရဲ့ 94 နှစ်ပေါင်းနေဆဲအကြွင်းမဲ့အာဏာပါဝါစမ်းရေပေါက်များကိုအသုံးပြုသလော
ယောရှုသည်, တစ်ဦးတရားဟောဆရာနှင့် "ရောဂါကိုငြိမ်းစေသော" နိုင်ဂျီးရီးယားမကြာမီကျနော်တို့စကားကိုနားထောငျပါမညျ
လီယိုနာဒို Favio, အောကျမေ့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်သူကိုအာဂျင်တီးနားရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာနှင့်တေးရေးဆရာ
Lorena Ruiz-Huerta, ယခုအချိန်တွင်များအတွက်ကုလားထိုင် hijack ထံအပ်နှံမူဝါဒကနေဖယ်ရှားသူတစ်ဦးသူရဲကောင်း
GALLEGO Manuel Gonzalez, ကြီးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာသည်နိုင်ငံတကာစီမံခန့်ခွဲမှု
Marco Antonio Corvalan, ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဦးကျော်ကြားတဲ့ဗိသုကာ
ကာတာလလွတ်လပ်ရေး၏ Santi Vila မှဲ့?
သမိုင်း၏ 100 နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်မှာကျမကွညျ့ ... အတူတူပင်ရောက်ရန်?
430 နှစ်ပေါင်းရာထူးသတိပေးနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ထမ်းဆောင်နိုင် ..
Ada Colau နေဆဲသငျသညျမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိလိမ့်မှကျူးလွန်ခဲ့သော။
ပယ်ပွင့်လင်းနှင့်နောက်တဖန်အပေါ်: Open ကို Lists မ
Carl Puigdemon အဆိပ်လှံလက်နက် Josep Borrell ဆန့်ကျင်ပစ်
Carl PUIGDEMONT'VE .. ဂျာမနီကိုကျေးဇူးတင်စကား Catalonia အစိုးရကျော်ဦးမှသင့်အခွင့်အလမ်းရတယျ
Catalonia: တစ်မကောင်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍစမ်းသပ်ပြီးသောသူသည်နိုင်ငံရေးသရုပ်ဆောင်များကိုအကြောင်းမရှိဘဲသူပုန်များဖြစ်လာကြပါပြီ, ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ၏မိုက်မဲကျက်ဘို့မဆိုအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Catalonia တားဆီးနှင့်တငျ့တယျလြောကျပတျခွငျးမရ, အတန်းတစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့မကြာခင်မှာကျင်းပလိမ့်မည်
Catalonia: တရားမျှတရေးနှေးကွေးဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုံ့ဆျောနှင့်နေရာအတွက်လူတိုင်းကိုထည့်လေ့မရှိ
Catalonia: အခွင့်အာဏာ, ဒေသဆိုင်ရာအရေးပါမှု၏ကျန်သည့်နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်မတရားနမူနာကင်းမဲ့?
Catalonia: အချိန်ကြာမြင့်စွာက "ရရှိသော" စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အရင်းအမြစ်ကို "ကိုရွှေ" မှ?
Catalunya - စပိန်, ချိုးဖောက်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်စှနျ့အလို့ငှာဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မနာလိုဆက်ဆံရေး
Catalunya: Exile, အတင်းအကျပ်လေယာဉ်ကြီးအနဂါးပြဌာန်း?
", La Grande Bouffe II ကို" စပိန်လျှောက်လုံးလမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အပေါ်မြင်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်: Catalonia အတွက်ဆင်ဆာ
Non-repayable ထောက်ပံ့ငွေခွင့်ပြုရသောယုံကြည်စိတ်ချမှု၏သိချင်စိတ်သည်, ပစ်ခတ်နှင့်ပလပ်
မရေရာဒွိဟနှင့်လူ့အချက် .. တန်ခိုးအာနုဘော်တစ်ခုအယောင်ဆောင်မြို့တော်ဝန်။
အဆိုပါ "surfeits" နှင့်ဂယက်ထအဖန်ဖန်ပြတ်တောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း
အဆိုပါ Bilderberg ကလပ်အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် "icebox" အဲလ်ဘတ် Rivera ၌တည်ရှိ၏
နိုင်ငံရေး၏ပြီးပြည့်စုံသောယောက်ျားသည် .. တိုင်းတာနဲ့အဆိပ်ရှိ၎င်း၏နည်းနည်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေထုအဘို့တန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ်
သူသို့မဟုတ်သူကိုစပိန်ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, မဖြစ်ကြ .. သို့မဟုတ်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည် .. ကျနော်တို့ကိုသူတို့ပွဿနာမြားစှာအတှကျအပွင့်လင်းတံခါးကိုစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုကြောက်ရမည်
စပိန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျနော်တို့ကနိုင်ငံရေး 160.000 များ၏ထိရောက်မှုမရှိသည်းခံရ၏
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ် hypocrisy နိုင်သူရှိပါဥရောပသမဂ္ဂအတွက်
စပိန်မင်းသမီးမွေးနေ့ Leonor ဟောင်းကော်မရှင်နာ Villarejo ၏ပေါက်ကြားသို့နစ်မြုပ်
စပိန်: ပြစ်ဒဏ်များနှင့် irreparable ဘေးဖြစ်စေတဲ့၏တည်းဖြတ်မူဟုတ်ကဲ့တင်းမာအစားထိုးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
စပိန်: အားလုံးနိုင်ငံရဲ့အလိုဆန္ဒကြောင့် shimmers အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါသည်
စပိန်: ဥပဒေများပြုပြင်ပြောင်းလဲကြသည်မဟုတ်လျှင်, ငါတို့သည်အသက်ရှင်နေထိုင်ရာစုနှစ်မှသူတို့ကိုကပြွီးအာမခံစာကြောင်းများမဖြစ်
Ignacio Gonzalez,a"ကိုထင်" အကျင့်ပျက်လက်အိတ်ဖြူသော့ခတ်
Isabel Cela, စပိန်အစိုးရဝန်ကြီး, လူမိုက်ကိုယူ
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဟာအလွန်ချွန်ထက်သောဓါးများနှင့်ကောင်းသောခွဲစိတ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ် .. တရားမျှတမှုအေးလက်ဖြင့်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
ETA ပင်သူ့ကိုယ်ပိုင်သက်သာဖြတ်, မေ့လျော့မထားဘူး
ဥရောပတိုင်းပြည်များတွင် "သာတူညီမျှ" ၏မရှိခြင်း .. ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများကိုအားနည်းသူတို့အခိုင်အမာထိုက်
အဘယ်သူ၏အခြေစိုက်စခန်းစပိန်အတွက်အလိုရှိသောခံရဖို့အများကြီးထွက်ခွာဖြစ်ကြောင်းအစိုးရများအတွက်ဒဏ်ဍာရီနှင့် subterfuge နန်းစံပြိုကျနေသည်
စပိန်၏အဓိက bane တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲအာဏာရှိသူတို့သက်မဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲစပိန်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပိုင်ခွင့်ကို "စိုစွတ်သောစက္ကူ" ကိုကိုယ်စားပြုသောအရာကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြစ်လာနေသည်
စပိန်နိုင်ငံရေးသမားများ၏ပျင်းရိခြင်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်းဟာဆရာဝန် FrancoStein ရှိ
များလွန်းထောက်ထားညှာထာသောဥပဒေများ, ခဲစကားကိုနား ထောင်. နေကြသည်။ အရမ်းပြင်းထန်ဥပဒေများ, ခဲကွပ်မျက်ခံရ။ (ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Franklin)
Manuel Marchena Gomez, တရားရုံးချုပ်အများအပြားအတုယူသင့်သည့်စံနမူနာထားပြီး 2007 ထံမှရှေ့နေ
အခြေအမြစ်မရှိသံသယမျိုးစေ့ကိုကြဲဖို့နိုင်ငံရေးတွင်မပါပိုဆိုးပြစ်မှုရှိပါသည် - Vox စစ်မှန်သောအဖြစ်မှန်၏လမ်းနှင့်ဒါရှုပ်ထွေးပွေလီအောင်လုပ်မပေး
Palma de Mallorca ခရီးသွားဧည့်ရန်တိုက်ခန်းငှားရမ်းတားမြစ်ထား
Pedro ငါက Short နှင့်မှန်မှန်ပြုသကဲ့သို့ငါတို့သည်လေးစားမှုဆုံးရှုံးဖို့စတင်ခဲ့ ..
အားသာချက်တခုပါရမီရှင်ဖြစ်လိုသူစိတ်ပျက်အဖြစ် Pedro Sanchez သမိုင်း၌အရပ်သို့ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်
သင့်အနေဖြင့်အချိန်အချို့ကိုပြည်သူပြည်သားအချို့အရူးနိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အရူးလို့မရပါဘူး။ အာဗြဟံသည်လင်ကွန်း
ပြန်လည်သုံးသပ်အမြဲတမ်းအကျဉ်းထောင်အကြောင်းကိုသံသယရှိပါတယ်ရှိလျှင်, အရာကိုယ်တိုင်ကဆန္ဒခံယူပွဲပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ကောင်းသူတို့အစဉ်အမြဲသံသယငျ့သှား။
Puigdemont ပြဇာတ် Tartuffe မြင်ကြလျှင်, ဖြစ်ကောင်း M.Rajoy "Molière" ရှည်လျားမတိုင်မီရေးထားပြီမယ်လို့
စပိန်၏ဥစ္စာဘဏ္ဍာ, အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်လူတွေကိုအနည်းငယ်အကြားဥစ္စာဓနဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာပရမ်းပတာနဲ့ tremebundo ၏အားသာချက်ယူ
Pedro Sanchez နဲ့သူ့ရဲ့ကျက်အကြောင်းကိုထင်မြင်ချက်များ
Vox - ငါတို့သည်ချင်နဲ့နားလည်သကဲ့သို့ပြင်းစွာသောအခြင်းနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းတာဝန်မရှိအသိနှင့်အတူမ
နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့လစာဖြည့်စွက်ရန် "33 အဆင့်" လျှောက်ထားတဲ့ PSOE အစိုးရဖြစ်လာ
နှင့် Ada .. ထပ်မဂ္ဂဇင်းအတွက်လိမ်စည်များနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းနှင့်အတူသေနတ်ကောက်ယူလိုက်ပါ။
¿ထိန်းသိမ်းရေး? fib .. ဒါမှမဟုတ် "ပန်ကာ" ၏ဆဲလ်၌ငါ့ကိုထားပါနှင့် key ကိုစွန့်ခွာယခုငါသွားပါ
သငျသညျစပိန် Catalunya ၏ဌာနခွဲအပေါ်အဆုံးအဖြတ်ဆန္ဒခံယူပွဲအရသိရှိရသည်။ ဖြစ်ပါ့မလား
ဒီဂွန်ဇာ Boye Tuset vs. Is Montesquieu? exconsejeros Catalonia ၏ဆနျ့ကငျြအစိုးရထောက်ခံ
တစ်တိုးတက်သောနိုင်ငံရေးတွင် camouflaged ဖက်ဆစ်ဝါဒသီးသန့်အဖြစ်ဟူသောဝေါဟာရကိုဒီမိုကရေစီကိုအသုံးပြုသည်ရှိပါသလော
"တစ်ဦးကနိုင်ငံရေးသမားကသူ့အလုပ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဘာမှမပြုကြလိမ့်မည်။ ပင်မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူများဖြစ်လာသည်။ " ဝီလျံ Randolph Hearst
"ဒါကြောင့်မကြာမီအလုံအလောက်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအနာဂတ်စဉ်းစားဘယ်တော့မှမ။ " အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း (1879-1955)
ထိုနေ့၏အခြို့သောသတင်းများ, စပိန်၏သာဓကအဖြစ်ပြောင်းလဲ ..
Bushido ဖြစ်ကောင်းကပွဿနာမြားစှာဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်, ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ features တွေအကောင်အထည်ဖေါ်။
က "မင်းတို့ကလည်း" သတိထားမိ, လက်အောက်ငယ်သားလည်းစဉ်းစား
ဘာစီလိုနာ 17 2017 သြဂုတ်လ - အကျဉ်းချုပ်အပြီးတစ်နှစ်ကြာဇာစ်မြစ်ကိုရှင်းလင်းမတိုက်ခိုက်မှုများ၏ဘေးဥပဒ်ကိုကျူးလွန်သူခှဲစိတျများမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု
အကျပ်အတည်း: ခရစ္စမတ် Carol "သူတို့ကလာနဲ့သွားနှင့်ကြွလာတော်ကိုရပ်တန့်ကြပါဘူး .. " မျှတမှုရန်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးကိုလက်ရှိထက် ပို. အကြီးအကျယ်အစီအမံလိုအပ်သည့်အခါ
Punta ကာန (RD) တအတွက်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 5.0 (ပီပီ 5.0)
အဆိုပါ "မိုဘိုင်း" ဒါ့အပြင်ကိုခေါ်ဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ်လိုအပ်သောနှင့်အလွန်အကျွံမီဒီယာ
စပိန်: နှုန်းထားများတစ် togado မှတဆင့်တရားမ္တွတုံ့ပြန်ရန်
Henry Kissinger ¿ညျပရောဖကျ, "ဉာဏ်အလင်း" conseguidor ?. မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အစွမ်းထက်မာစတာ။
Kissinger, Rockefeller, သင့်ရဲ့မာစတာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာ၏ pawn?
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်လူမှုရေးပေါက်ကွဲမှုတစ်ဦး "ရှက်စရာ" ပြပွဲသို့တက်ရောက်ရန်အသစ်က "ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်" လိုအပ်ပေလိမ့်မည်
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သို့မဟုတ်စိတ်စွန်းကွက်ခြင်းမရှိဘဲလိင်တူဆက်ဆံခြင်း ... ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းကသူတို့ရှုပ်ထွေးသောဖုံးကွယ်
စိုးရိမ်ယောဂ၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်နှင့်အရေးတကြီးကတော့ Vinyasa နှင့်အတူ corrigirse နိုင်ပါတယ်
အသစ်ကအာကာသတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အကို "အထီးကျန်" ၏ထင်ဟပ်တိုးပွားလာနေသည်, ငါတို့ဖန်တီး shared ပါပြီ
"ကမ္ဘာ၏မာစတာ" ငါတို့မြင်, ကြားနိုင်, လေ့လာမှု, စံချိန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
အဆိုပါ "အခမဲ့သစ်ကိုအတုတွေးခေါ်ရှင်" .. အမည်မသိ "ဘုရား" မှနီးပါးကို "သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်း" ။
အဆိုပါ Clone နှင့်ကိုယ်ပွားတစ်ခုသွေးဆောင်ပူးပေါင်းကြံစည်မှု?
2018 နွေရာသီသတင်း: အရာအားလုံးရှည်ကျဆုံးခြင်းအဘို့ဖြစ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကြိမ်တိုင်တိုင်နှင့်ထူးဆန်းခံစားချက်တွေကိုဆောင်ကြဉ်း
ကျိုးပဲ့အနာပျောက်နှင့်သူတို့၏အနာကိုတက်ချည်နှောင်။ (ဆာလံ 147: 3)
အားလုံးထင်မြင်ယူဆချက်လေးစားရပါမည်ကို၎င်း, ဇာတ်လမ်းတစ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားလိုအပ်ပါတယ်လျှင်, လျှောက်ထားရန်နောက်ကျဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့၏ "အကောင်းဆုံးရောင်းချသူ" ဘာသာတရားအားလုံးကလက်ဝါးကြီးအုပ်ပါပြီ
တစ်ခုနီးပါး 18% စပိန်အလွဲသုံးစားမှုတိုင်ကြားချက်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်
သငျသညျ .. ဝေမျှသို့မဟုတ်မနိုင်မတစ်ဦးကရောင်ပြန်ဟပ်မှု
ပျြောရှငျတဲ့ .. မစုံလင်ကမ္ဘာ၏အနာဂတ်နှင့်အထီးကျန်ဆန်မှနောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်မိန်းမောတွေဝေဖို့အကြောင်းရှိသနည်း
လိုအပ်သောတစ်ဦးကဘာသာစကား coitus interruptus နောက်တဖန် Start သို့မဟုတ်အဘိဓာန်ကိုဖတ်ရှုမျောက်လဆန်းအတိုင်းလိုက်နာ ?,
"သင်ယဉ်ကျေးမှု, လွတ်လပ်မှု, တန်းတူညီမျှမှု, တရားမျှတမှုလိုသလား? သူကမြင်သည်နှင့်conquístalasလာနှငျ့သငျတို့အားပေးတခြားသူတွေလိုခငျြဘူး။ "ရီကာဒို Mella